Vaovao - Fitaterana sy fitehirizana ny famaky
● Fitaterana ny famaky
Mandritra ny fiasa sy ny fametrahana ny axle dia ilaina ny manakana ny amponga tsy hidona, izay mety hiteraka fahasimbana eo an-toerana, ho vaky sy handokoana ny amponga. Ny forklift dia tokony horaisina am-pitandremana rehefa mihazakazaka izy. Fady mafy ny mifandona amin'ny camshaft sy manamboatra sandry, na manimba ny fonon'ny vovoka.
● Fitehirizana ny famaky
Soso-kevitra: ny trano fanatobiana entana dia tsy tokony hapetraka avo loatra.
Fomba: tokony hisy fametahana eo anelanelan'ny axe sy ny tany, misy banga hazo na ondana hafa eo amboniny. Ny cushion dia tokony hampiasaina hanasarahana ny mpiray ary hanamboatra azy amin'ny takelaka mampifandray.
◇ Ireo axles misy kodiarana kodiarana isan-karazany dia hapetraka misaraka mba hisorohana ny fonon'ny vovoka tsy hotorotoroina mandritra ny fametrahana azy
◇ Ny takelaka mampifandray dia ampiasaina amin'ny fitaterana sy fitahirizana lojika fotsiny, ary tsy maintsy esorina amin'ny fampiasana azy io!
◇ Raha ampiasaina ny famaky voatahiry mandritra ny fotoana maharitra, zahao raha efa antitra ny faritra misy ny fingotra, miharatsy ve ny menaka manosotra ary mety miasa tsara ve ireo faritra azo ovaina?
Ny axle dia tsy maintsy arovana amin'ny orana mandritra ny fitaterana sy ny fitehirizana! Tokony halefa sy ho maina ny trano fanatobiana entana.